» योगेश र ईश्वर पोखरेलको जम्काभेट हुदा पनि एक अर्कासँग बोल्दै बोलेनन् ! आखिर किन ? यस्तो छ कारण (हेर्नुहोस भिडियो) योगेश र ईश्वर पोखरेलको जम्काभेट हुदा पनि एक अर्कासँग बोल्दै बोलेनन् ! आखिर किन ? यस्तो छ कारण (हेर्नुहोस भिडियो) – हाम्रो खबर
योगेश र ईश्वर पोखरेलको जम्काभेट हुदा पनि एक अर्कासँग बोल्दै बोलेनन् ! आखिर किन ? यस्तो छ कारण (हेर्नुहोस भिडियो)
गत मंसिर ५ गते अघिसम्म एउटै सरकारमा मन्त्री रहेका योगेश भट्टराई र ईश्वर पोखरेलको अहिले राजनीतिक मोर्चा फेरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरोध गर्दै भट्टराईसहित अन्य ६ मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । कानुनी रुपमा विभाजन भइनसकेको र राजनीतिक रुपमा विभाजित भइसकेको नेकपाका दुई पक्ष यतिबेला शक्ति संघर्षमा रहेका छन् । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि अब यी दुई पक्षबीचको शक्ति संघर्ष संसदमा केन्द्रीत भइरहेको छ । यसकै साइड इफेक्ट पोखरेल र भट्टराईबीचको आजको संवादहीनता हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । रातोपाटी बाट